राष्ट्र बैंक – Page2– Banking Khabar
राष्ट्र बैंकमा जागीरका लागि एप्लाई कसरी गर्ने ?
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ११४जना कर्मचारी माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीयमा २१ जना, सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय(चाटर्ड एकाउन्टेन्स) १०,सहायक निर्देशक अधिकृत तृतिय कानून २ पदमा आवेदन मागेको …
राष्ट्र बैंकमा ११४ जनालाई रोजगारी
अब हरेक चाडपर्वमा नयाँ नोट सटही, दशैँ कुर्नु नपर्ने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब हरेक राष्ट्रिय चाड पर्व, तथा दिवसहरुमा नयाँ नोट सटही सुविधा दिने भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातजाति, भाषाभाषी, तथा उनिहरुले मनाउने चाडाबाडको लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट उपलब्ध गराउने भएको छ …
थापाथलीमा राष्ट्र बैंकको नयाँ भवन निर्माण शुरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली परिसरमा सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन निर्माण शुरु गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावशेषलाई हटाएर पुरानै शैलीमा अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न लागिएको हो । थापाथलीमा ४२ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा छ । जग्गामा एक अर्ब …
राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा प्रदेश मन्त्रीको धर्ना
बैंकिङ खबर । प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक विदा अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव राष्ट्र बैंकको जनकपुर कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् । आइतबार मन्त्रीसहितको टोली कार्यालयको मुलगेटमा धर्ना बसेको हो । प्रदेश सरकारले आइतबार …
वित्तीय क्षेत्रमा १५ अर्बभन्दा बढी निक्षेप पठाउँदै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब ४ करोड १५ लाख बराबरको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पठाएको भएको छ । राष्ट्र बैंकले ३६६ दिनका लागि मुद्दती निक्षेपमा राख्न बाणिज्य बैंक विकास बैंक र वित्तीय संस्थालाई शुक्रबार सूचना जारी …
डा. गोपाल भट्ट । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरु मेनेजमेन्ट पढिरहेका छन् । संस्थागत नेतृत्वका साथै सरकारी अफिसर, राष्ट्र बैंकमा जागीरे, बैंकर, प्रोजेक्ट मेनेजर लगायतको उत्पादन मेनेजमेन्ट शिक्षाले नै गर्छ । नेपालको मेनेजमेन्ट शिक्षाको कोर्स नेपालका हरेक विश्वविद्यालयले राम्रोसँग विकास गरेका छन् …
केन्द्रीय सरकारले समेत हस्तक्षेप नगरेको ‘राष्ट्र बैंक’ : प्रदेश सरकारको कब्जामा
विजय पराजुली/बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र वित्तीय प्रणाली केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले २०७४ मा बनेको र २०७५ भदौ बाट लागु भएको देवानी …
‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण’
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य …
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत जनशक्ति ब्यवस्थापन विभाग अब डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको मातहतमा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत जनशक्ति ब्यवस्थापन विभागको जिम्मा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई दिइएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको मातहतमा रहेको विभागलाई अर्का डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको मातहतमा सारिएको हो । यससँगै, राष्ट्र बैंकका १७ वटा विभागमध्ये शिवराज श्रेष्ठको …
नोटमा केरमेट गर्नेलाई तीन महिना जेल
बैंकिङ खबर । नोटमा केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिना जेल सजाय हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै नोटमा केरमेट गरेमा ३ महिना जेल वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने जनाएको छ । मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन …
भारुमा ऋण लिएर लगानी गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई बाटो खुल्यो
बैंकिङ खबर । बाणिज्य बैंकहरुले भारतीय रुपैयाँमा पनि ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले एक निर्देशन जारी गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले कुल प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म मात्र भारुमा ऋण …
केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकका झन्डै एक दर्जन चुनौतीहरु
बैंकिङ खबर । विश्वव्यापी रुपमा मौलाउदै आएको उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले गर्दा केन्द्री बैंकका कार्यहरु जटिल र चुनौतीपुर्ण हुदै आएका छन । यस्ता चुनौतीपुर्ण कार्य सम्पादनकालागि बैंकले अत्यन्त सजग र सरल रुपमा कार्य सम्पादन गर्न जरुरी हुन्छ । यस्ता चुनौतीहरु निम्नानुसार …
विकट क्षेत्रमा नोट पुर्याउन हवाइजहाज भाडामा लिँदै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ खबर । विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा नोट पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले हवाईजहाज भाडामा लिन लागेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार सिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । नेपालगन्ज कार्यालयबाट जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लास्थित वाणिज्य बैंकमा …
बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशनमा किन भयो ढिलाई ? राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो निर्देशन
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई साता वितिसक्दा पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशित नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्रमा विवरण सार्वजनिक गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । त्रैमास महिना सकिएको १५ दिनभित्रमा कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य …